Ukuwa kunye nobusika kwifektri, abaxhasi - China Abavelisi bokuwa kunye nobusika
Ilaphu elikhanyayo i-100% yenayiloni, ukukhanya okungekuko ukuzalisa, eyona ikhuselekileyo neyona mpahla intle yomntwana wakho, yiza nobushushu ngaphandle kokuzibamba.
Ijusi yamadoda phantsi kwebhatyi ngelaphu i-100% ipholiyesta, i-90/10 yerhasi ezalisa, eyona ikhuselekileyo neyona mpahla intle, yenza ubushushu ngaphandle kokuzibamba.
Ibhatyi yokwenene yentombazana enelaphu elikhanyayo i-100% yenylon, i-90/10 yokugcwalisa ezantsi, eyona mpahla ikulungeleyo, yenza ubushushu ngaphandle kokuzibamba. Hlala ufudumele kwaye unamanzi aphezulu agxothayo. Unokuthintelwa ukuba ube manzi ngemvula okanye ngemini yekhephu.
Ibhatyi ende ezantsi eneepokotho ezimbini ezizodwa, ayigcini nje ngokufudumeza, kodwa ikwabonakala intle. 100% polyamide
Ijacket yokwenene yabafazi enelaphu elikhanyayo i-100% yenylon, i-90/10 yokugcwalisa ezantsi, eyona mpahla ikulungeleyo, yenza ubushushu ngaphandle kokuzibamba. Hlala ufudumele kwaye unamanzi aphezulu agxothayo. Unokuthintelwa ukuba ube manzi ngemvula okanye ngemini yekhephu.
Isiqwenga sengubo sinokuhlulwa kubini, indawo engaphandle ikhuselwe ngumoya kunye nemvula, icandelo elingaphakathi ligcwele i-90 yokwenyani, inemfashini kwaye inesitayile, yonke ingubo ifudumele kwaye iyanelisa.